Umlando Wenkampani - Sichuan Zili Machinery Co., Ltd
I-Sichuan Zili Machinery Co., Ltd, eseSifundazweni SaseSichuan, yasungulwa ngo-2002. Ingumkhiqizi ochwepheshe ogxile ekuklameni, ekukhiqizeni nasekusabalaliseni izinga eliphezulu le-TGF series rotary airlock valves kanye ne-TXF 2-way diverter valves asetshenziswa kumpushana kanye ama-granules pneumatic conveying systems.
Sineqembu lethu le-R & D. Iminyaka eminingi, ngokusekelwe ocwaningweni nasekuthuthukisweni kwethu, samukela ubuchwepheshe obuhle kule ndawo ngaphakathi nangaphandle. Manje ikhwalithi yemikhiqizo yethu isithuthuke kakhulu. Ikakhulukazi i-valve ye-rotary airlock yangaphandle, kanye nama-valve e-diverter esizukulwane sesithathu Sawuqeda ngokuphelele ukwenzeka kwempushana yomzila, ukuvimba, nokunamathela. Futhi ikhwalithi yomkhiqizo ifinyelele ukuphakama okusha
·Ngo-2002, inkampani yethu yasungula futhi yabiza i-Sichuan Ziyang Zili Grain And Oil Machinery Co., Ltd, saqala ukuthuthukiswa nokukhiqizwa kwama-valve ajikelezayo kanye nama-valve ahlukanisa izindlela ezimbili.
·Ngo-2003, sawina ama-oda ama-3 ezinkampanini ezinkulu ezikhiqiza ufulawa e-China, futhi sazuza inani lemali yokuthengisa engu-1.2 million RMB. Kwephula isimo sokuthi izinkampani eziningi zokusanhlamvu kanye nowoyela zingenisa izikhiya zomoya kanye nemikhiqizo yamavalvu e-diverter evela phesheya.
·Ngo-2004, i-valve yethu ye-rotary yazuza impumelelo enkulu ekusebenziseni i-angaphandle ukuze kuxazululwe inkinga yokuvuza kwempushana osekuhluphe ozakwabo basekhaya iminyaka eminingi. Ngo-2004, sazuza inani lokuthengisa le-RMB eyizigidi ezi-4.
·Ngo-2005, sazuza inani lokuthengisa le-RMB eyizigidi eziyisi-6.
·Ngo-2006, sandisa umthamo wokukhiqiza futhi sathola ukuthengiswa kwezigidi ezingu-12 zama-RMB.
·Ngo-2008, siyaqhubeka nokwandisa ukukhiqizwa. Futhi kancane kancane savula izimakethe zaphesheya, sathengisa imikhiqizo yethu e-Indonesia, Philippines, Malaysia nakwamanye amazwe ngezinkampani ezithumela ngaphandle. NgoJuni wonyaka ofanayo, sathola impendulo kumakhasimende ukuthi kube nezinkinga ngomkhiqizo. Abaholi bethu banake kakhulu futhi bakhumbula ngokushesha amasethi wemikhiqizo engama-300 eyayithunyelwe ngaphandle futhi esikhundleni sawo kwafakwa imikhiqizo emisha yamakhasimende. Sikholelwa ngokuqinile ukuthi ikhasimende kuqala, ikhwalithi kuqala..
·Ngo-2010, Siqhubekile nokwandisa umthamo wokukhiqiza, saqala ukwakha imboni yethu, futhi sathuthukisa izinto zokutywina ezizigcobayo ze-SF ezingenawo uwoyela. Futhi usayine izinkontileka zokubambisana ne-Yihai Kerry Group yasekhaya kanye ne-COFCO. Ngaleso sikhathi, imikhiqizo yethu iyashoda futhi inani lokuthengisa elizuziwe lezigidi eziyi-18 zama-RMB. .
·Ngo-2012, ukwakhiwa kwesikhungo sethu sezimboni kwaqedwa, futhi sazuza inani lokuthengiswa kwe-RMB eyizigidi ezingama-26.
·Ngo-2013, sandise ukutshalwa kwezimali ku-R&D kanye nokusebenza, sabuyekeza ngokuqhubekayo imikhiqizo yethu, sathola iqoqo lokuqala lezimali ezisekela izinguquko zobuchwepheshe kazwelonke, sasungula umugqa wokukhiqiza we-CNC, futhi sathuthukisa nakakhulu ikhwalithi nokunemba kwemikhiqizo yayo. Ngawo lowo nyaka, kwathengiswa ama-yuan ayizigidi ezingu-32 ngedivayisi ye-valve ejikelezayo kanye ne-valve yokuguqula izindlela ezimbili.
·Ngo-2014, imikhiqizo yethu emisha yathola isitifiketi selungelo lobunikazi semodeli yensiza yensiza, yaphumelela ekubuyekezweni kwebhizinisi lobuchwepheshe obuphezulu kazwelonke, futhi yathola izimali zokuqala zikahulumeni zokusungula iphrojekthi yesayensi nezobuchwepheshe. Ngo-2014, inkampani yazuza imali yokuthengisa engu-36 million RMB.
·Ngo-2017, safakwa ohlwini ngempumelelo lwe-Tianfu (Sichuan) Joint Equity Exchange Centre Technology Board. NgoJulayi, sithole ukufaneleka kwelayisense yokusebenza kokuthekelisa futhi saphumelela ukubuyekezwa kwebhizinisi lobuchwepheshe obuphezulu kazwelonke. Futhi kuzuzwe ukuthengiswa kwezigidi ezingama-RMB ezingama-38.
·Ngo-2018, sathola isitifiketi se-CE futhi sasungula uMnyango Wezohwebo Wamazwe Ngamazwe. ibhizinisi lethu lanwetshwa ngokusemthethweni laya ezimakethe zaseYurophu nezaseMelika futhi lazuza imiphumela emangalisayo. Ifinyelele inani lemali yokuthengisa ye-RMB eyizigidi ezingama-50..
·Ngo-2019, sashintsha igama lenkampani yethu kwaba i-Sichuan Zili Machinery Co., Ltd futhi sazuza inani lokuthengisa lama-RMB ayizigidi ezingu-56.
·Ngo-2020, sasungula uhlelo lwethu olusha lweminyaka emihlanu: ngokusekelwe ocwaningweni nasekuthuthukisweni nasekuthengisweni kwemikhiqizo ekhona ye-rotary airlock kanye ne-two-way diverter valve, ububanzi bebhizinisi bukhule kancane kancane ukuze bunikeze amakhasimende impushana kanye ne-particle pneumatic conveying design engineering. .
I-3-Way Diverter Valve, i-valve ejikelezayo, i-rotary feeder, i-valve ye-airlock, I-Electronic Control Valve, I-3 Way Ball Valve,